Warbixinnada Waxqabadka Nidaamka Guri La'aanta ee Gobolka Washington waxay bixiyaan macluumaad ku saabsan tallaabooyinka waxqabadka nidaamka hoylaawe la'aanta ee muhiimka ah oo ay ku jiraan dhowr ka mid ah Tallaabooyinka Waxqabadka Nidaamka Guri La'aanta ah ee HEARTH iyadoo la adeegsanayo qeexitaanka warbixinta Waaxda Guriyeynta iyo Horumarinta Magaalooyinka. Warbixinta Waxqabadka Nidaamka Guri La'aanta ayaa sidoo kale bixisa macluumaad kale oo macno leh oo ku saabsan nidaamka ka jawaab celinta dhibaatada guri la'aanta bulshada.
Xariirka guud ee ku saleysan websaydhka ayaa bixiya macluumaad hal-joogsi ah oo ku saabsan kaalmada guri-la'aanta, kharashka, iyo waxqabadka https://public.tableau.com/profile/comhau#!/
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan cabbiraadaha waxqabadka nidaamka hoylaawe la'aanta ee Ganacsi ka warbixinayo ama u baahan yahay fadlan dib u eeg dokumentigan: Qiyaasaha Waxqabadka Nidaamka Guri La'aanta (PDF)
Waxaa la daabacaa sanad walba, Kaarka Warbixinta Degmada iyo Isbarbar dhigga Sannad ilaa Sannad ayaa bixiya natiijooyinka waxqabadka ee Gobolka Washington guud ahaan, iyo Degmo kasta. Xogta dhammaan mashruucyada guri-la'aanta ee kaqeybqaata HMIS ayaa lagu soo daray warbixinnadan.
Warbixinnada Waxqabadka Nidaamka Guri La'aanta ee Gobolka Washington waxaa laga heli karaa Jaantuska. Tableau ma taageerayo noocyada 8, 9, iyo 10 ee Internet Explorer. Haddii aad dhibaato ku qabtid daawashada warbixinnada isku day inaad adeegsato daalacashada Chrome, Safari, ama Firefox.
The Kaarka Warbixinta Degmada waxay siisaa macluumaad gobolka iyo degmo kasta oo ku saabsan tallaabooyinka waxqabadka nidaamka oo dhan oo ay ka mid yihiin ka bixitaanka guryaha joogtada ah, ku soo noqoshada hoy la'aanta, muddada dheer ee guri la'aanta ah, iyo kharashka looga baxayo guri joogto ah. Kaadhka Warbixinta Degmadu waxay kuxirantahay khariidad is dhexgal ah, taas oo kuu oggolaanaysa inaad dib u eegto natiijooyinka waxqabadka muddada warbixinta. Dhagsii badhanka Xogta Daaqadda si aad uhesho miis wada-hadal ah oo kuu oggolaanaya inaad aragto isbeddellada waqtiga. Waxa kale oo ku jira macluumaadka macnaha guud sida natiijooyinka tirinta PIT iyo sicirka banaan ee kirada.
La daabacay seddexdii biloodba mar, dashboodyada nooca-gaarka ah ee noocan ah waxay bixiyaan natiijooyinka waxqabadka gobollada guud ahaan, hay'ad kasta, iyo mashruuc kasta. Waqtigaan, kaliya degmooyinku ay kujiraan Isku dheelitirka Daryeelka Sii-wadista ee Gobolka ayaa lagu daray dashboodyada nooca mashruuca ah.
Dashbood Degdeg Ah Oo Dib-u-Dejin ah (shabakad)
Dashboard Ku-meelgaar ah oo Ku-meelgaar ah (shabakad)
Dashboardka Ka Hortagga Guri La'aanta (shabakad)
Nidaamka Macluumaadka Maareynta Hoyga (HMIS) waa isha xogta inta badan macluumaadka loo isticmaalo warbixinnada waxqabadkayaga. HMIS waxaa u adeegsada bixiyeyaasha adeegga guriyeynta hoylaaweyaasha si ay u ururiyaan una maareeyaan xogta la soo uruuriyay inta lagu guda jiro bixinta kaalmada guriyeynta ee dadka la soo deristey hoy la'aanta.
Degmo kasta oo ka tirsan Gobolka Washington waxay soo sheegtaa dhammaan kharashaadka iyada oo loo marayo ilaha maalgelinta ee mashruucyada guri-la'aanta guri kasta ee beeshooda. Ganacsiga wuxuu isku daraa xogta kharashaadka xogta HMIS si loo abuuro Warbixinta Dahabka ah ee laga heli karo bogga Qorshaha Istaraatiijiyadeed ee Gobolka, Warbixinta Sannadlaha ah iyo Hantidhawrka.
Wixii macluumaad faahfaahsan ee ku saabsan Qiyaasta Waxqabadka Nidaamka Guri La'aanta Caafimaadka, fadlan tixraac HUD qeexida warbixinta iyo HUD CoC fiidiyowyada tababarka waxqabadka.
Fiiro gaar ah: Waxaad u baahan doontaa inaad gujiso badhanka Soo-dejinta si aad u daawato una isticmaasho qalabkan.
Dashboard-ka Balance ee Falanqaynta Sinaanta Gobolka wuxuu eegaa kala duwanaanshaha jinsiyadeed iyo qowmiyadeed ee nidaamka hoylaawaha laga soo galo ilaa laga baxo. Waxay isticmaashaa qaddar gelitaan oo caadi ka dhigaysa tirada dadka deggan waxayna sidoo kale siisaa tilmaamayaal waxqabadyo dheeri ah oo awood u leh inay hoos ugu daadiyaan heer degmo ama heer gobol.
Istaraatijiyadaha lagu hagaajinayo waxqabadka
Dukumiintiyo dhowaan soo socda
Maareeyaha Waxqabadka Guri la'aanta